Kupeta E-Bike Vagadziri & Vatengesi - China Kupeta E-Bike Fekitori
SEBIC 20 inch aluminium yakavanzwa bhatiri kupeta emagetsi bhasikoro
Eco-inoshamwaridzika, inopeta ebike yevakuru uye vechidiki iri yakashongedzwa, ine simba, uye yakavakwa neeprimiyamu zvinhu zvinodiwa kuti vafambe mumigwagwa yakaoma yeguta. Yakareruka asi yakasimba, inopeta aruminiyamu furemu matombo mune-zvinoda maficha uye epamusoro mafekitori. Iyo yepamusoro-torque 250-watt mota. Yakawedzerwa mileage. Inobvisika 36V lithium-ion bhatiri.
SEBIC 20 inch 8 kumhanyisa kumisa 48v 500w kupeta emagetsi bhasikoro
Kubatisa e-bhasikoro mazana mashanu emota mota kuri nyore sekukweva - iyo yekumhanyisa sensor inotaurira bhatiri kuti rikande mukati nerumwe chete kumhanya rubatsiro uchiita kuti ufambe nekukurumidza uye mushe. Nechigaro chinogadziridzwa chakasimudzwa nemabhanduru, avo vari kutsvaga sumo yenyika ye eco-hushamwari kuenda vanogona kuzviita mukunyaradza neiyi inoshamisa yekupinda-chikamu kupeta e-bhasikoro.
SEBIC 16 inch diki turu inopetwa yemagetsi bhasikoro
Saizi yefuremu ndeye 16inch, Chiedza uye Flexible, kurema kwakakura kuri nezve 20KG, ndiyo sarudzo yakanakira vafambi.
Ebike nekumiswa kumashure inoita kuti iwe ugare wakasununguka kana iwe uchikwira munzira dzemakomo.
SEBIC 20 inch mini mugwagwa wakapetwa ebike
STRONGER 250W-350W MOTOR: Yakashongedzerwa ne350W yekumhanyisa mota isina brashi, yakaiswa kune vhiri rekumashure, inowedzera simba rakasimba rekukwira makomo, inopa simba rakaringana rako rekufamba zuva nezuva, uchifamba mugomo kana kumhanyisa munzira yaunofarira. Ichimhanyisa inosvika makumi maviri mph, zvinokusvitsa ipapo nekukasira. Gadzirisa zviri nyore kumatunhu akasiyana siyana, uchitora iwe kuti unakirwe nekunakidzwa kwekunze.
SEBIC 26 inch aloywheel guta mbiri mota yemagetsi yekupeta bhasikoro
GARA UYE NEE7 SPEEDS - kwira makomo senge mukuru neiyi yemagetsi bhasikoro yemagetsi SHIMANO 7-yekumhanyisa giya inochinjisa kune yakavimbika chaiyo uye yekutasva kutonga iyo yega bhasikoro inoshuva.
SEBIC nyowani mwenje unonakidza 20 inch kupeta mini emagetsi bhasikoro
Yakasimba alloy yemagetsi bhasikoro inogona kutsigira mushandisi kusvika ku220lb, 240W mota ine simba, 15-25km yakachena magetsi renji, uye 25-35 km nerubatsiro rwemagetsi. Iyi bhasikoro remagetsi inokupa iwe irinyore uye inoshanda rwendo rwekushanda kana chikoro, hapasisina kuzara bhazi kana pevhu. Zvakare, ine dhiraivhu dhizaini, inogona kuve yakanyanya nzvimbo-kuchengetedza kusevha kana isingashandise.
SEBIC Kukwidziridzwa 20 inch kupeta emagetsi bhasikoro
Iyo eLife Infusion yakakwana kune avo vanotsvaga mhinduro inovimbika yekufamba kwavo kwemazuva ese kana kunakidzwa zvishoma kwekutandara kutasva. Iyo Infusion inokutora iwe kusvika makumi matatu mamaira pa15.5mph pane imwechete mubhadharo (mileage inoenderana nehuremu hwemutasvi nenzvimbo yakavharwa).
SEBIC guta rinofamba rinopetwa 16 inch mwenje kurema emagetsi bhasikoro
SEBIC Yakapetwa rinorema mafuta tire kumitisa izere kuturika 20 padiki moutain yemagetsi bhasikoro
Saizi furu iri 20inch, aluminium alloy, mafuta ebike maitiro, akasimba kwazvo uye anotonhorera.